Amed Resort any Bali " Journey-Assist - Diving sy snorkeling tsara indrindra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Amed
Amed no toerana filokana amin'ny fisakafoanana tsara indrindra any Bali
27 aprily, 2020
Amed dia tanàna iray ao amin'ny tapany avaratra-atsinanan'i Bali, 85 km miala an'i Denpasar.
Ny faritra fivarotana dia ilay morontsiraka amoron-dranomasina izay misy halavany 14 km miaraka amina tanàna maromaro eo. Ny marimarina kokoa dia ny tanàna sivy dia misy mponina sivy. Raha mifindra avy amin'ny morontsiraka atsimo-atsinanana:
Ny tanànan'i Amed dia ao amin'ny ilany avaratra andrefana. Hatramin'ny nivoarana fatratra tamin'ny fizahan-tany fizahan-tany, dia nomena azy ilay hotely.
Ity toerana fitsangatsanganana ity dia toerana mangina somary tsy feno olona izay fitsidihan'ny mpandeha reraky ny atsimon'ny nosy mandritra ny andro vitsivitsy. Ary koa, Amed dia miavaka amin'ny ranomasina milamina, mety tsara amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina miala sasatra. Tonga lafatra ho an'ny fianakaviana manan-janaka.
Inona no tokony hatao any amin'ny Amed. Famandrihana sy snorkeling.
Diving sy snock ao Amed. Bali
Amed dia foibe fisitrandrahana Bali sy snorkeling izay mirehareha toerana enina misy haran-dranomasina ary fonenan'ny fiainana an-dranomasina.
Betsaka ny sekoly misidina. Ny toe-javatra eto dia izay mety ho an'ny vao manomboka sy ireo mpankafy za-draharaha amin'ny fisandratana sy ny snorkeling.
Manakaiky ny morontsiraka ao amin'ny ranomasina Bali ao ambany no misy marobe misitrika fitsirihana malaza. Ity, indrindra indrindra ny famoronana Etazonia sy Japon. Akaiky akaikin'ny morontsiraka, amin'ny halalin'ny halaliny, miaina ny haran-dranomasina sy trondro miloko.
Ny tranonkala antsitrika malaza indrindra eto, 20 km miala ny Amed akaikin'ny tanànan'i Tulamben, dia ny sambo Liberty.
Ny sambo nilentika tao Liberty akaikin'i Amed
Amin'ny maraina, ny tsenan-trondro sy hazan-dranomasina dia miasa ao amin'ny tanànan'i Amed, izay itondran'ireo mpanjono tuna vaovao.
Dolphins ao Amed
Raha manaiky ny mpanjono eo an-toerana ianao hitondra anao any an-dranomasina ny maraina, dia hanome anao fahafahana hahita maso ny feso ao amin'ny fonenany voajanahary.
I Amed dia azo raisina ho mifanohitra amin'i Kuta, Bukit ary Sanur. Misy rivo-piainana milamina, tsy misy fifamoivoizana feno olona. Indray mandeha ihany ny fiara na ny bisikileta mandeha an-dàlana manaraka ny morontsiraka. Milamina araka izay azo atao ny ranomasina eto, tsy sahala amin'ny ranomasina any atsimon'i Bali.
Eto ianao dia afaka mandeha snorkelling, diving, jono. Tsara homarihina ny riandrano misy eto sy ny volokano Agung, izay manolotra fomba fijery mahafinaritra avy eny amorontsiraka.
Manombatombana ny fantsona vidy any akaikin'i Amed
Tsara homarihina fa tsy ny fotoana mety mety indrindra amin'ny fialam-boly any akaikin'i Amed, izany hoe amin'ny volana Desambra ka hatramin'ny martsa. Satria mandritra io vanim-potoana io dia misy ny fikajiana ny fahitana amin'ny tsy fahampian'ny fahitana ao anaty rano.
Betsaka ny sekoly misidina sy ny fanofana fitaovana any amin'ny faritra.
Tombanana ny vidiny amin'ny taona 2019 dia:
Fisitrihana iray - 410t. -440t. ropia
Dokotera roa - 650t. -690t. ropia
Ny vidin'ny fanamafisana ny cylinder oksizenina (15 l) dia 80 taonina. ropia
Fanofana fitaovana (ankoatra ny cylinders) - 50t. ropia
Solosaina fanaraha-maso ambany - 70t. ropia
Kilasy roa andro ho an'ireo vao manomboka - 3 rupees (ny vidin'ny fampianarana manokana dia miankina amin'ny fandaharana)
Shops sy tsena ao Amed
Amin'ity tranga ity dia tsy dia tsara eto ny raharaha. Eo amin'ny arabe manamorona ny morontsiraka dia tsy mahita afa-tsy minimarket mivarotra tsakitsaky sy zava-pisotro ianao.
Misy tsena minima tsara ao amin'ny tanànan'i Bunutan. Izy io dia antsoina hoe Rumah Adi & Adi Shop, ary saika hitanao izay rehetra ilainao ao.
ATM ao Amed
Betsaka ny ATM amin'ny làlan-dàlana lehibe izay mivezivezy amin'ny morontsiraka.
Tsy misy fizahana manokana momba izany. Misy tranom-bakoka kely dia kely, akorandriaka maro be mitovy amin'ilay miparitaka any amin'ny an'arivony manerana ny Nosy, misy ihany koa ny toeram-piompiana sira ary ny sehatra iray tsara hitazana Dzhemeluk.
Fambolena sira ao Amed
Fijoroana amoron-dranomasina sy volkano Agung avy amin'ilay efitrano fandinihana Dzhemeluk (Jemeluk)
Ny volondrano volkano ao amin'ny morontsiraka Ameda dia mainty na volondohany. Ho fanampin'ny fasika, misy ny satroka bitika mitovy amin'ny loko mainty sy volo. Noho izany, ny morontsiraka amin'ny angon-drakitra dia tena am-panajana. saingy tokony ho fantatra fa ny rano amin'ireny tora-pasika ireny dia mazàna ary tony sy madio ary madio foana.
Weather in Amed androany
Safidio ny sosona ilainao ary alaivo ny fanazavana ilainao. Fanetrentena, hafainganam-pandeha, onja, orana, rahona ao Amed. Izany rehetra izany dia misy ao amin'ny Widget etsy ambany.